Madaxweyne Shariif oo digniin u jeediyay Siyaasiyiinta aan ku jirin DKMG
Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo khudbad ka jeedinayay Munaasabad lagu xusayay Aas aaskii Ciidanka Xoogga oo shalay ka dhacday Magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu digniin u jeediyay Siyaasiyiinta ka madax banaan dowladda KMG ah oo uu xusay inay fowdo ka wadaan dalka.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu sheegay in siyaasiyiinta looga baahan yahay inay joojiyaan Foodada oo ay ugu kacayaan Korsiga haddii si wanaagsan ay ugu qeyb qaataan siyaasadda Soomaaliya, waxaana uu intaasi ku daray in dowladdiisu marna aysan ogolaaneyn in si foodo ah wax lagu wado.
Madaxweyne Shariif ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka ka dhex taagan barlamanka, isagoo sheegay in dowladdiisa aysan u xayirnaaneyn barlamanka uu ku sheegay in uu leeyahay labo gudoomiye. Dadaal badanna oo uu xusay inay ku bixiyeen xalinta khilaafkaasi ay suuro gal noqon waysay, hase ahaatee waxa uu sheegay in haddii barlamanka ay midoobi waayaan oo ay ogolaan waayaan Isbadalka ay ka tashanayaan 825-ta waxgaradka ah ee ansixinaya qabyo qoraalka Dastuurka cusub.
Sheekh Shariif Shekeh Axmed ayaa soo hadal qaaday Dastuurka oo uu ka taagan yahay muranka Xooggan kaasi oo uu sheegay Madaxweynaha inay ku jiraan qodobo uusan jecleysan, hase ahaatee dib loo fiirinayo, maadaama uu sheegay in dadka waxgaradka ah ee ansixinaya Dastuurkaasi aysan aheyn dad wax magarato ah.
Qabyo qoraalka Dastuurka cusub oo loo sameynayo dalka Soomaaliya ayaa waxa kasoo horjeeda qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, kuwaasi oo ku tilmamay Dastuurkaasi in uu yahay mid aan ka talineyn Maslaxadda Umadda Soomaaliyeed islamarkaana ay wataan dad ay ku sheegeen inay yihiin Ajinabi oo dalkan u horseedaya burbur iyo dhibaato hor leh.